Puntland Oo Qoonsatay Kheyre Oo Tagay Waqooyiga Gaalkacayo
Thursday July 11, 2019 - 08:09:10 in News by Hadhwanaag News
Dowlad goboleedka Puntland ayaa war kasoo saartay safar shalay galinkii dambe
Dowlad goboleedka Puntland ayaa war kasoo saartay safar shalay galinkii dambe uu Ra'isulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ku tagay waqooyiga Gaalkacayo, halkaas oo dadweyne fara badan ay kusoo dhoweeyeen.
Wasiiro ka tirsan Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacayo ayaa Ra'isulwasaaraha ku eedeeyay in uu ku kacay fawdo, isla markaasna hareer maray hab maamuuskii loo diyaariyay.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa yiri "Ra'isulwasaaraha waxa uu si cad u hareer maray hanaankii aan u dajinay, wuxuuna yiri aniga hanaan raaci maayo, umana socdo in isimo , iyo odayaal la kulmo, waxaan u socdaa in aan dhalinyaro la kulmo".
Ra'isulwasaare Kheyre ayaanan ka qeybgalin kulan ku talogalka uu ahaa in uu ka dhoco madaxtooyada Gaalkacayo, halkaas oo mas'uuliyiinta maamulka iyo odayaasha dhaqanka ay ugu diyaarsanaayeen.
Wasiir Dhabancad ayaa ku baaqay in 'in loo guntado sidii Soomaaliya mustaqbalkeeda loo badbaadin lahaa'.
Xafiiska Ra'isulwasaaraha kama uusan jawaabin eedeymihii loo jeediyay, balse mar uu garoonka Maxamed Cawaale Liibaan ee Gaalkacayo kula hadlayay dadweyne badan ayuu yiri "Shacabka iyo dowladda waa wadnihii iyo beerkii qofka bini'aadamka ah, lama kala qaadi karo shacabka iyo dowladda".
Balse wasiir kale oo ka tirsan Puntland ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in Ra'isulwasaaraha uu ku jiro olole doorasho, taasna ay ugu wacantahay in uu dad isu soo baxay la hadlay.
Ra'isulwasaare Kheyre iyo wafti wasiiro iyo taliyeyaal ciidan u badan ayaa muddo 15 cisho ah ku sugnaa Galmudug, markii uu Gaalkacayo tagayna waxa uu u talaabay dhanka waqooyi oo uu ka arrimo maamulka Puntland.